Ukujonga kwakhona: Ithala leencwadi lasePenelope Fitzgerald- Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Ivenkile yeencwadi kaPenelope Fizgerald
Ivenkile yeencwadi yinoveli enkulu kaPenelope Fitzgerald. Olu hlelo lukhulu lwe-Impedimenta (njengesiqhelo) lunoguqulelo luka-Ana Bustelo kunye noPostface nguTerence Dooley. Ndikushiya a ikhonkco lokuhlela.
Kwivenkile ethengisa iincwadi, uPenelope Fitzgerald ubalisa ngebali likaFlorence Green, ongumhlolokazi ofuna ukuseta indawo yokugcina iincwadi kwidolophu encinci, eHardborough, apho ahleli khona iminyaka esi-8. Imiselwe ngonyaka we-1959, njengoko besitshilo kwilali encinci yokuloba eNgilane.
Kunokuthiwa uFlorence Green, njengo Mnu. Keble, wayeyedwa, kodwa oku akuzange kubenze babe ngabantu abakhethekileyo eHardborough, apho uninzi lwabemi bayo babekhona. Iingcali zendalo zalapha, umsiki weengcongolo, umthumeli, uMnu Raven, indoda esuka emgxobhozweni, bakhwela iibhayisekile zabo bodwa, beme ngumoya, bejongwe ngababukeli, abakwaziyo ukuxela ukuba ngubani ixesha ngokubonakala kwabo ngaphaya kolwandle.
Inoveli enezinto ezichaphazela ubomi bomntu ezikhumbula ubomi bombhali.
Incwadi ilungile. Ibhalwe kakuhle kakhulu. Kudala ndikhangela isiphawuli ukuyichaza ngeentsuku ezimbalwa kwaye ubuqili okanye ubuhle buya kuba yeyona ilungileyo. Libali ngaphandle kwamahla ndinyuka. Akukho ziganeko zenziwayo, kwaye ungothuki okanye uqaphele iimvakalelo zabalinganiswa kunye nebali njengakunye EChekhov. Nangona kunjalo, ibali likungqongile, likunika amaphiko kwaye likwenza ukuba ungayeki ukufunda. Kuluyolo ukuqwenga imigca.
Eli yelenqe lijolise ekuvulweni kwivenkile yeencwadi ngummelwane, uFlorence Green, kunye nokuphendula kwabemi belali, ukusebenzisana nabo kunye neengxaki ezivela kwimicimbi yemihla ngemihla.
Ngumzobo wendlela yokuphila kwilali encinci yokuloba eNgilane embindini wenkulungwane yama-XNUMX. Umahluko kwiiklasi zentlalo kunye nobudlelwane phakathi kwezityebi kunye neeklasi ezinamandla kwivenkile yethu yeencwadi kubonakala ngokucacileyo.
Incwadi elungileyo yincindi exabisekileyo yomphefumlo katitshala, eqholiweyo kunye neenjongo ezixabisekileyo zobomi obungaphaya kobomi.
Kunjalo, njengoko besitsho, Ubuthathaka kweenoveli ezisi-8 ezibhalwe nguFitzgerald. Ke ndizokukhangela ezinye.
Zimbini iintlobo zokufunda ezithandwa ngabathandi beencwadi. Ezo zeencwadi ezithetha ngeencwadi kunye nezo zithetha ngeevenkile zeencwadi. Le yenye yazo. Ukuba unomdla, ndikucebisa ngaphandle kwamathandabuzo I-84, iCharing Cross Road
Iincwadi ezintsha zeza neepasile ezilishumi elinesibhozo, zisongelwe ngephepha elimdaka ngebala. Njengokuba ebakhupha ezibhokisini, babesenzela ulawulo lwabo lwentlalo.
Kwiindawo ezininzi ndiyabona ukuba bathetha ngePolemic kaNabokov kunye noLolita kunye nenguquko eyayivelisa edolophini. Kodwa olu tshintsho aluqaphelekanga kum. Ukubonakala kukaLolita bekungabonakali kum njengendawo yokutshintsha kwinoveli.
Ifilimu ka-Isabel Coixet
Ndifumanise ekulungiseleleni olu hlaziyo ukuba u-Isabel Coixet wayalela ifilimu malunga nenoveli kwaye yonyulelwa i-12 Goyas. Ndikunye noEmily Mortimer njengoFlorence Green.
Emva kokukhangela kakhulu imovie, kwiNetflix, HBO kunye neAmazon Prime, akukho nanye kula maqonga abonelela ngemovie. Ekugqibeleni Ndiyifumene kwilayibrari yesixeko sam. Khumbula ukuba nawe unayo le mithombo xa kufikwa ekufumaneni izixhobo zokumamela kunye nokulalelwayo.
Ndiyithandile imovie. Ulungelelwaniso olulungileyo noluthembekileyo. Ngephepha likaEmily Mortimer. Yonke indawo yethala leencwadi ayiqokelelayo kwivenkile yeencwadi iyayiqaqa, kodwa senditshilo ukuba uCoixet akakhange athathe mvume zininzi.
Ewe, ifilimu ayikwazi ukuhambisa umahluko weeklasi zexesha, indlela ezinxibelelana ngayo kunye nomzabalazo phakathi kwabo njengoko ubonwa encwadini.
Ndikushiya i-trailer endikuyo andikukhuthazi ukubona ukuba awuyifundanga inoveli kwaye ngendlela onokuthi ubone ngayo ezinye iilayisensi. Ewe lulungelelwaniso ukuze ufumane nayiphi na ilayisensi oyifunayo.
Kwaye wena? Ukhe wafunda kwaye / okanye wabukela imovie? Ingaba ucinga ntoni?
Ndonwabile ngenoveli, ndaqala ukufunda Intyatyambo eluhlaza okwesibhakabhaka, uphumelele I-National Book Critics Circle Award ebalisa ngobomi bukaNovalis, kodwa akakwazanga ukundibamba :-(
Iacobus nguMatilde Asensi